नाकावन्दीका कारण घरेलु उत्पादनले वजार पायो – Gulmiews
नाकावन्दीका कारण घरेलु उत्पादनले वजार पायो
१६ मंसिर २०७२, बुधबार १७:५९ Sanju Kauchha
गुल्मी, मंसिर १६ । भारतिय नाका वन्दीले ईन्धन लगायतको अभाव भए पछि वल्ल अहिले गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासमा घरेलु उत्पादनले वजार पाउन थालेको छ । ‘घरको ओदान चुलोबाट हटाएर थन्काईएको थियो । त्यसको हिफाजत नगर्दा हराएछ ।
अर्को सानो ओदान खिया लागेर काम नलाग्ने भएछ । अहिले ग्याँस नपाएर विस वर्ष पछि दाउराबाट खाना पकाउन सुरु गरेका छौ । त्यसैले ओदान किन्न आएकी हुँ ’–तम्घासकी हरीकला पन्थीले भनिन –‘आखिर दुख पर्दा त आफ्नै मान्छे र आफ्नै वस्तु चाहिने रहेछ जस्तो लाग्यो ।’ पन्थी सहित तम्घास वजारका थुप्रै घर परिवारले घर नजिकैको खाली ठाउँमा वा छतमा दाउराको चुलो बनाएर खाना पकाउन थालेका छन् ।
कतिपय परिवार भन्छन् –‘विसौं वर्ष पछि दाउराले पकाएको खानाको वेग्लै स्वाद चाख्न पाईयो ।’ जाडोमा आगो ताप्न पनि पाईने, खान पनि पाक्ने किन चाहियो ग्याँस ? के हाम्रा पुर्खाले ग्याँस वालेका थिए र ? भनेर प्रति प्रश्न समेत गर्न थालिएको छ । पक्की घरको डेरामा वस्नेहरुले भुसे चुलो र कराई चुलोमा खाना पकाउन सुरु गरेका छन् । तम्घासका होटलवालाहरुले समेत त्यही चुलो प्रयोग गर्न थालेको होटल व्यवसायी मञ्च गुल्मीका अध्यक्ष बुद्ध थापाले बताए । उनले भने –‘अघिल्लो हप्ता देखि नै दर्जनौ होटलका साथीहरुले ग्याँस नभएर होटल बन्द गर्ने तयारीमा छौं भनेर गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो । मैले ग्याँसको मात्रै भर नपरौं गाउँघरे चुलो पनि प्रयोग गरौं भने पछि त्यसै गरिएको छ । ’
तम्घासको देउराली देखि उदिनढुङ्गा सम्मका भाडा पसलहरुमा वुझ्दा ग्याँस अभाव भए पछि भुसे चुलो र कराई चुलोको बिक्रि बढ्दै गएको बताए । थोरै दाउराले पनि खान पाक्ने उक्त चुलो तम्घासका अधिकांस सम्पन्न परिवारले समेत प्रयोग गर्न थाले पछि ग्याँस वाल्ने सदरमुकाम वाहिरका होटल व्यवसायीहरुले पनि प्रयोगमा ल्याउन थालेका छन् । पश्चिम क्षेत्र नम्वर ३ र उत्तर मुसिकोट पौदीअमराई नेटा दर्लिङ्ग लगायतका गाउहरुमा भाडाकुँडा विक्रि हुने तम्घास उदिनढुङ्गाको रोशनी भाँडा पसल, गंगा हार्डवेर, उदिनढुङ्गा मिलन चोकका नाथकन्या स्टोर, सन्ध्या भाँडा पसल र तम्घास नयाँ वजारको रेग्मी भाँडा पसल , पुतली वजारको न्यु रेसुङ्गा जनरल स्टोर लगायतका भाडा पसलहरुमा भुसे चुलो र ग्याँस चुलो किन्न आउनेहरु बढ्दै जान थालेको बताईयो ।
ति चुलाहरु यहिका मिस्त्रीहरुले पनि पनि वनाउने र वुटवलमा बनेर पनि आउने बताईएको छ । यसरी सदरमुकाम तम्घासकै उच्च घरानले समेत घरेलु उत्पादन गर्न थाल्नुले परनिर्भता कम हुने देखिएको छ ।
तस्वीरः तम्घासका वजारहरुका केहि भाँडा पसलहरुमा भुसे चुलो र कराईहरु
Comments comments	मिल्दाजुल्दा शिर्षकहरु:	दाङमा प्रतिबन्धित औषधी बेचेको आरोपमा गुल्मीका गौतम पक्राउ...	९ कार्तिक २०७३, मंगलवार १५:४८	लोकमान प्रकरण सत्ता गठवन्धन तोड्ने खेलः कोईराला...	८ कार्तिक २०७३, सोमबार ११:५१	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ताजा अप्डेट	साँझ ७ वजे सम्म प्रशासनका कर्मचारी व्यस्त
@gulminewsसाँझ ७ वजे सम्म प्रशासनका कर्मचारी व्यस्त https://t.co/Hcn4dykyEj #Gulminews #Gulmi35 mins agoRetweetमाओवादी केन्द्र दिव्रुङ्गको एकता भेला सम्पन्न https://t.co/yzCXgTFkX9 #Gulminews #Gulmi54 mins agoRetweetहस्तिचौरमा शैक्षिक तथा धार्मिक महोत्सव हुने https://t.co/0BEDLnfqeD #Gulminews #Gulmi56 mins agoRetweetनेपालका वनमा काम गर्ने श्रमिकलाई कानुनले देख्दैन https://t.co/V340Nm3Yvd #Gulminews #Gulmi20 hours agoRetweetPost Edited: कुर्घाको त्रिभुवन माबिमा नेबिसंघको इकाइ कार्य समिती गठन https://t.co/N5bneOaKdW23 hours agoRetweet	गुल्मीको मौसम	Partly Cloudy	19 °C	27 Oct 2016